मनोरञ्जन « Today Khabar
महानायक मात्र होइन, महादानी पनिः राजेश हमालद्धारा २ करोडको जग्गा दान
काठमाडौं । दर्शकले महानायक राजेश हमाललाई अहिले ठुलो पर्दामा नदेखेको धेरै भयो । हमाल पछिल्ला दिनहरुमा केही टेलिभिजक कार्यक्रमहरुमा व्यस्त हुनुहुन्छ । को बन्छ करोड पति कार्याक्रम नेपालमा सर्वाधिक रुचाईको
काठमाडौं । लामो समयसँगैं काम गरेर लामो समय देखि विवादमा रहेका चर्चित भारतीय कमेडियन फेरि एकसाथ देखिने भएका छन । कुनै समय कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोबर मिल्ने साथी रहेका
पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ गितमाथि प्रतिबन्ध किन ?
काठमाडौं–लाेक गायक पशुपति शर्माले ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको व्यंग्यात्मक भाव बोकेको गीत आफ्नो यूटुव च्यानलमार्फत हटाएका छन् । सो गीत दुई दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो । शर्माको गीतमा प्रयोग
सन्चारमन्त्रीको ठाडो आदेश पछि चलचित्र बोर्डकी अध्यक्ष निकिताले राजीनामा दिइन्
काठमाडौं- नेपाल चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले राजीनामा दिएकी छन्। गत आइतबार मन्त्रालयको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मन्त्री बास्कोटाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सोही कारणले कारबाहीमा पर्नुभन्दा अगाडि राजीनामा
रबी लामिछानेका नवविवाहित श्रीमति निकितालाई सन्चार मन्त्रीको ठाडो आदेशमा पदबाट हटाउन निर्देशन
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसँग दोस्रो बिहे गरेकी चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई सञ्चार मन्त्रालयले बर्खास्त गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा नै उपस्थित
नेपालका सुजन भारतको रियालिटी शो डान्स प्लस फोरमा फस्ट रनरअप बने
काठमाडौंः नेपालका युवा डान्सर सुजन मार्फा तामाङ भारतकाे चर्चित डान्स रियालिटी शाे डान्स प्लस फाेरकाे फस्ट रनरअप भएका छन् । विभिन्न चरणका प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट डान्स गर्दै सुजनले सबैको मन जितेका
चलचित्र ‘सयकडा दश’को प्रचार गर्न टोली पुर्वी नेपालमा
चन्दन रौनियार सुनसरी : हस्यकलाकार मनोज गजुरेलले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र ‘सयकडा दश’को प्रचार गर्न चलचित्र टोलि पूर्व आएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको चलचित्र भनेर प्रचार गरिएको सयकडा दशका निर्देशक
रबि लामिछाने र निकिता पौडेलबीच कोर्ट म्यारिजः बैशाखमा औपचारिक बिवाह हुने
काठमाडौं । पच्छिलो समय चर्चाको शिखरमा रहनु भएका चर्चित सन्चारकर्मी रबि लामिछानेले निकिता पौडेल सँग अदालतमा कोर्ट म्यारिज गरेका छन् । रबिले आफनो सामाजिक सन्जाल मार्फत दुई जना कोर्ट म्यारिज
टेलिभिजन एक्टर दीपिका कक्कड बनिन् विग बोस सिजन १२ को बिजेता
एजेन्सी । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले सञ्चालन गर्दै आएको रियालिटी शो विग बोस सिजन १२ को बिजेता टेलिभिजन एक्टर दीपिका कक्कड बनेकी छिन् । आइतवार राति घोषणा भएको विग बोसको
Yes, I am Pregnant ! ‘चौका दाउ’
काठमाडौं । कानुनले बृद्धा दिने घोषणा गरेका र समयले पिण्ड खाने उम्मेर पुगेका ब्यक्तिहरु पनि विहानै सुन्दर केटीको फोन आए नौजवान बन्छन् । सकेसम्म मिठो र अंग्रेजी भाषामा उनीहरु कुरा
दोस्रो नेपाल आइडलको बिजेता बने रवि ओडः प्राप्त गरे २२ लाख नगद र गोल्डेन माइक उपहार
काठमाडौं : नेपाल आइडल सिजन २ को विजेता रवि ओड बनेका छन् । रविले २२ लाख र गोल्डेन माइक पाएका छन् । आइडलको फ्रस्ट रनरअप बिक्रम बराल बने । बरालले २० लाखको चेक
नेपाली चलचित्र इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सिक्वेल चलचित्र निर्माण गरेका निर्देशक विकासराज आचार्यले नयाँ चलचित्रको छायांकन सुरु गरेका छन् । काठमाण्डुको मैतिदेवी मन्दिरमा पूजा गर्दै चलचित्रको छायांकन सुरु गरिएको हो ।